अहिले विश्व फुटबलमा एउटा तथ्य मात्र निश्चित छ र त्यो हो, यो अनिश्चित छ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण हिस्सा युरोपको हुन्छ । कारण स्पष्ट छ, विश्वका जति पनि राम्रा खेलाडी छन्, तिनीहरूमध्ये लगभग सबै युरोपमै खेल्ने गर्छन् । त्यसो भनेको युरोपको क्लब फुटबल र तिनले खेल्ने लिगमा । लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वकै सर्वाधिक अब्बल दर्जाका खेलाडी हुन भने उनीहरू दुवै युरोपमै त खेल्छन् ।
त्यसैले विश्व फुटबलमा जे हुन्छ, त्यसमा युरोपेली क्लब फुटबलको ठूलो हिस्सा हुन्छ । अब प्रश्न पनि युरोपेली क्लब फुटबलमै अड्किएको छ, यो फेरि कहिले सुरु हुन्छ त ? त्यहाँ जसरी फुटबल सुरु हुनेछ, त्यसलाई अरूतिर पनि पछ्याइनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण युरोपेली क्लब फुटबल अहिले ठप्पको स्थितिमा छ, खालि बेलारुसको एउटा अपवाद छाडेर । बेलारुसको क्लब फुटबलको खासै अर्थ नहुने हुँदा त्यहाँ भइरहेको फुटबल पनि खालि हाँसोको विषय मात्र हुने गरेको छ ।
युरोपेली क्लब फुटबलमा पनि पाँच लिगलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइन्छ र सबै राम्रा खेलाडी यिनै लिगमा खेल्न सपना बुन्ने गर्छन् । मरिहत्ते गर्छन्भन्दा हुन्छ, खेलाडीले यी लिगमा खेल्न । यी हुन्, इंग्ल्यान्डको प्रिमियर लिग, स्पेनको ला लिगा, इटालीको सिरी ए, जर्मनीको बुंडेस लिगा, अनि फ्रान्सको लिग वान । यसलाई ‘बिग फाइब’ पनि भन्ने गरिन्छ । अझ इंग्ल्यान्ड, स्पेन र इटालीलाई मात्र जोडेर तीन ठूला लिग भन्ने पनि चलन छ र यसलाई भन्ने गरिन्छ, ‘बिग थ्री’ ।
संयोगले यिनै तीन देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी बढी देखिएको छ, विशेषत: स्पेन र इटालीमा । महामारीका कारण धेरैको मृत्यु भएको यिनै दुई देशमा हो । इंग्ल्यान्ड पनि उत्तिकै प्रभावित छ । अहिले यी तिनै देशमा लिग फेरि कसरी सुरु गर्ने र कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ । थरिथरीका नयाँ–नयाँ उपाय अगाडि आइरहेका छन् । यी उपायमध्ये कसैलाई केही मन परिरहेका छैन भने कसैलाई कुनै तथ्यमा चित्त बुझेको छैन ।
सबैभन्दा पहिले फ्रान्सको लिग वानबाट । फ्रान्सेली सरकारले त्यहाँ सेप्टेम्बर महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको ठूलो भेलालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँ फुटबल हुने कुरा नै भएन । यस्तोमा फ्रान्सेली फुटबल संघ निर्णय गर्न बाध्य रह्यो, अब त्यहाँ लिगका बाँकी खेल हुने छैनन् । संक्रमण सुरु हुन अगाडि लिग जुन स्थितिमा थियो, त्यहींबाट लिग टुंगेको निर्णय गरियो । यो निर्णयको एउटा ठूलो विशेषता के रह्यो भने लिगलाई शून्यकै स्थितिमा झारिएन् ।
त्यसैले लिग रोकिएको स्थितिमा जुन टिम अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा थियो, तयसैलाई विजेता घोषणा गरियो । त्यसअनुसार पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लिग विजेता रह्यो । पीएसजीको २७ खेलबाट ६८ अंक थियो र लिगको शीर्ष स्थानमा थियो, त्यसैले यही टिम च्याम्पियन बन्यो । मार्से ५६ अंकमा दोस्रो स्थानमा थियो । त्यहाँ अब कुन–कुन टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ, त्यसबारे भने निर्णय भएको छैन । यसअघि नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियममा पनि यस्तै निर्णय भएको थियो ।
त्यहाँका सरकारको निर्णय लिग अगाडि बढाउन प्रतिकूल भएपछि पूरा प्रतियोगिता नै रोकिएको थियो । यी दुई देशमा लिग मात्र रोकिएन्, विजेता टिमको पनि घोषणा गरिएन्, फरक यहाँनिर छ । लिग रोकिएको स्थितिमा नेदरल्यान्ड्समा आयाक्स र बेल्जियममा क्लब ब्रुग शीर्ष स्थानमा थियो । उनीहरूको भाग्यमा लिग च्याम्पियन हुन लेखिएको थिएन, यस २०१९–२०२० को सिजनमा । त्यहाँका फुटबल संघले आ–आफ्नो देशको लिग नै सुरु नभएको स्थिति मानेर प्रतियोगितालाई शून्यमा झारेको थियो ।
यस्तै निर्णय भने फ्रान्समा गरिएन् । अब प्रश्न इंग्ल्यान्ड, स्पेन, इटाली र जर्मनीमा फ्रान्सकै निर्णय लागू गरियो भने के हुनेछ त ? इंग्ल्यान्डमा लिभरपुल अगाडि छ । लिग रोकिन अगाडि लिभरपुल लगभग उपाधिको नजिक पुगिसकेको थियो, खालि एकाध जित र अंक मात्र आवश्यक थियो । त्यसमाथि लिभरपुलले ३० वर्षयता पहिलोपल्ट लिग जित्न लागेको थियो । लिग रोकिन अगाडि लिग तालिकामा उसको २९ खेलबाट ८२ अंक थियो, दोस्रो स्थानमा म्यानचेस्टर सिटी धेरै पछाडि थियो, २८ खेलबाट ५७ अंकमा ।
स्पेनमा बार्सिलोनालाई अग्रता प्राप्त छ, त्यहाँ २७ चरणका खेल सकिएका छन् । बार्सिलोनालाई दोस्रो स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडमाथि खाली दुई अंकको मात्र अग्रता प्राप्त छ । यसको अर्थ त्यहाँ चर्काे प्रतिस्पर्धा छ । यस्तै स्थिति इटालीमा छ । त्यहाँ युभेन्ट्स २६ खेलबाट ६३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा रोमा रहेको छ, खाली एक अंक मात्रको दूरीमा । जर्मनीमा भने बायर्न म्युनिख अगाडि छ, २५ खेलबाट ५५ अंकमा ।
दोस्रो स्थानमा बोर्सिया डर्टमन्ड रहेको छ, ५१ अंकमा । फ्रान्सकै निर्णयलाई पछ्याउने हो भने विजेता यिनै शीर्ष स्थानमा रहेका टिम हुनेछन् । एउटा तथ्य के निश्चित छ भने यी चार देशमा फ्रान्सकै जस्तै निर्णय गर्न गाह्रो छ, किनभने यहाँ हुने खेलको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि मोटो रकमको अनुबन्ध छ, विशेषत: इंग्ल्यान्डको । लिगका बाँकी खेल नहुने हो भने त्यहाँको एउटा क्लबले करोडौं डलर गुमाउने निश्चित छ, जुन कसैलाई पनि सह्य छैन ।
त्यसैले प्रश्न यी देशमा लिग कहिले र कसरी सुरु हुने हो, यी प्रश्नमात्र निर्णायक हुनेछन् । यसका लागि पनि थरिथरी उपाय अगाडि आइरहेका छन् । जस्तो सबै खेल बन्द रंगशालामा गर्ने, कोही पनि दर्शकलाई प्रवेश नदिने, खालि टिभीमा मात्र प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने । अनि जति पनि खेल हुनेछन्, ती भीडभाड हुने स्थानबाट टाढा गर्ने, त्यसको अर्थ क्लबले तटस्थ मैदानमा खेल्ने । त्यति मात्र होइन, खेलाडीले मास्क लगाएर खेल्ने, खुसियालीमा अँगालोसमेत नमार्ने ।
अनि खेल्न अगाडि सबै खेलाडीलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको त छैन भनेर कडिकडाउ रूपमा परीक्षण गर्ने । यी सबै निर्णय लागू गर्न पछाडि प्रत्येक देशको लिग आयोजकले युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) सँग अनुमति पनि लिनुपर्नेछ र यसको कारण हो, यी क्लबका लागि यूईएफएले आयोजना गर्ने युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जे होस्, अहिले एउटा तथ्य मात्र निश्चित छ कि युरोपको क्लब फुटबलमा वास्तवमै अन्योलता छ ।